खाडी बाट बाबाले भाबुक हुदै भन्नु भयो बाबुलाई बचाउन किड्नी समेत बेच्न तैयार छु, आमा रुदै मिडियामा (मार्मिक भिडियो)
ब्लड क्यान्सर पीडित सिन्धुलि मरिण गा.पा.३ का ६ वर्षिय वालक निमा लामालाई ब्लड कायान्सर भएको छ उनको उपचारका लागि कम्तिमा २२ देखि २५ लाख् सम्म लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। डाक्टर हरुको सल्लाह अनुसार त्यति पैसा जम्मा नगरे उपचार नै सुरु नहुने कुरा पनि आज हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। काठमाडौ स्थित सिभिल अस्पतालमा अहिले उपचार भै रहेको छ । उपचारका लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले सहयोको भावना भएको मनमुटुहरु लाई सहयोगको हातहरु अघि बढाइ दिनुहुन अनुरोध पिडितका आमाले भन्नु स्कटनेपाल लाइ जानकारी गराउनु भयो ।
“निमा लामाको बाबा टलक लामा कतारमा कार्यरत हुनु हुदो रहेछ बिगत 23 महिना देखी । उहाँ पर्देशिनु भएको एक साल नपुग्दै बाबू निमा लामा लाई ब्लड क्यासर भएकोले उहाँले कमाउनु भएको रकमले बाबूलाई सकभर उपचार गरि रहनु भएको र सके सम्म रिन पान गरेर पनि उपचार गराइरहनु भएको रहेछ । छोराले घरमा आउनु बाबा मलाई भेट्नु मन छ भन्छन रे । उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब घर जान्छु मैले परदेशमा कमाएको रुपैयाले छोरालाई उपचार गर्न सकिन घर गएर अब श्रीमान श्रीमतिनै भएर सरसहल्ला गरि हामी छोराको उपचारको लागि किड्नी समेत बेच्न तयार छौ भन्नू भो। टलक लामाको यो सब्दले हामीलाई निशब्द बनायो । उहाँको आफ्नो सन्तान प्रतिको माया देखेर रुन मन लाग्यो साच्चिकै भाबुक बनायो। यो कस्तो बिडम्बना कस्तो बज्रपात यी ६ बर्षिय बालक माथी । आफ्नो सन्तान गुमाउनको पिडा कस्ले पो सहन सक्छ र” ।
के साँच्चै निमा लामाले उपचार पाहुछन् त? के गरीबी हुनु पाप हो? यो आमाको पिडामा तपाई हाम्रो सानो सानो सहयोगले मलम पट्टि मिल्छ भने, हामी किन सहयोग नगर्ने त? आउनुहोस् हामीसबै मिलेर यो बाबुको सहयोगमा जुट्टौ। ६ बर्ष ब्लड क्यान्सर निमा लामालाई सहयोग गरौँ। स्कटनेपाल प्रस्तोता नीलमणि भण्डारी संगको अन्तरबार्तामा उहाले रुदै थप जानकारी दिनु भएको छ । तल पुरा भिडियो हेर्नुहोला ।
हजुर हरु पनि निमा बावू को उपचारमा सहयोगी बन्न चाहानु हुन्छ भने सम्पर्क नंवर 977 9860645392 खाता नंवर : 29070100086
खाता नोम्बेर २९०७०१०००८६ निर्मला लामा भोलन
ग्लोबल आइ एम इ बैंक नया बानेश्वर ।